भोलि संसार बिउझिँदा मेरो आजको असफलता मेटियोस्…. – Pramb's Weblog
अप्रील 14, 2011 by PRAMB
भोलि संसार बिउझिँदा मेरो आजको असफलता मेटियोस्….
क्यामेरा समुन्द्रि छालले बगाएपछि....... मैले कसरी उतार्न सक्थे र ??
‘बितेको वर्षलाई फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?’ विजयकुमारको दिशानिर्देश कार्यक्रममा प्राय अतिथिलाई सोधिने प्रश्न । एउटा कुरा शास्वत सत्य हो फर्केर हेर्दा उपयोगी र अनुपयोगी दुबै खाले अनुभवले जो कोहीलाई थिचेकै हुन्छ ।
२०६७ लाई फर्केर हेर्ने हो भने म ठुलो उपलब्धि पनि त्यहीँ देख्छु आफूले केही गर्न नसकेको यथार्थ पनि त्यहीँ देख्छु ।
चेन्नाईस्थित पाँच तारे होटलको वातानुकुलित कोठामा बसेर म स्मरण गर्न खोज्दै छु बितेको वर्ष । स्नातक सकेको वर्ष जागिर खाएको पहिलो वर्ष एउटा समूहको साथीलाई छाडेर व्यवसायीक जीवनमा प्रवेश गरेको वर्ष । दिमागमा तत्काल आएका विषयहरु यिनै हुन् । यी सबै उपलब्धि नै भए ।
स्वार्थी बन्दा केही साथ गुमे जागिरको एकोहोरो लगाममा लाग्दा अध्ययन ठप्प भयो भविष्य कोर्ने बाटाहरु साँघुरिँदै गए जस्तो लाग्छ । १२ दिनका लागि मात्रै भए पनि चेन्नाइ आएपछि यहाँको पढाईको तरिका परिश्रमि मानिस मलाई अजिब कै लाग्यो । नेपाल छोडेको पहिलो अनुभव भएकोले पनि होला मैले आफूलाई यथार्थसँग भिजाउनै सकिरहेको छैन । आफूसँग केही छ नै भने पनि मैले त्यसलाई कुनै दर्जा दिने ठाउँ देखिन । आफूले गर्नु पर्ने सिक्नुपर्ने र जुध्नुपर्ने ठाउँ धेरै रहेछन् म कस्तो साघुँरो ठाउँमा हुर्किएको कस्तो सानो परिधिमा आफ्नो भविष्य खोजेको यस्तै यस्तै ।
यहाँ दस दिनदेखि एउटै कोठा घोत्लिँदा जे सोचे पनि म फर्किए पछिको परिवेश उही हुन्छ । बिहान कलेज दिउँसोदेखि मध्य रातसम्म त्यही समाचारको खोजी । यो एकोहोरो दैनिक कहिलेसम्म चल्ने हो ? मसँग कति नै ज्ञान छ र मैले त्यो लाखौं पाठकलाई दिने ? यदि म सक्षम छैन भने जागिर खानकै लागि लेखेर किन पाठकलाई ठग्ने ? अनि मेरो भविष्य कुन आधारमा कहाँ मैले खोज्ने ? मात्रै प्रश्न छन् । गुनासा छन् आफैँ सँग ।
‘वर्क फर जोए नट फर रेप्यूटेशन’ अग्रज पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले मलाई मेरो करियरको सुरुवाती दिनमा दिएको सल्लाह । यति धेरै गुनासा र अनुत्तरित प्रश्नको बिचमा मैले कसरी रमाइलोको लागि गर्ने । पत्रकारिता पेशाप्रति मेरो रुचि घट्दै गएको हो कि मैले यसमा आफ्नो भविष्य नदेखेको हो । सबैतिरबाट प्रश्न मात्रै उब्झिन्छ ।
नयाँ वर्ष यस्तो प्रश्नैप्रश्नबाट सुरु भएको छ । शनिबार त म काठमाडौं पुगिहाल्छु । त्यसपछि पहिलाकै दैनिकी रोज्ने कि केही फरक बाटोको सोच बनाउने ? फेरी प्रश्न ।
मानिसको जीबनबाट यी सबै प्रश्न समुद्रको छालले बगाएर लगे हुने नि । साच्चै मेरो क्यामरा कुन स्थितिमा कहाँ पुग्यो होला । आँखा झिम्काउन नपाउँदै बगाएर लग्यो । समुद्रको गर्भमा पुग्यो होला । मेरा केही स्मृति बोकेर । जुग जुग ती स्मृति त्यहीँ रहन्ेछन् । कुनै दिन कसैले टाइटानिक मुभिमा जस्तो गरी समुद्र मुनि पुगेर मेरो स्मृति खाज्ला कि के थाहा ।
मेरो नयाँ क्यामेराबाट खिचेको पहिलो फोटो.......
मैले अझै आफूलाई ती कुराहरुमा आस्वस्त पार्न सकेको छैन । कसरी मेरो क्यामरा पाउचबाट झर्यो कसरी त्यो आधीँ बोकेर आएको छालले आँखा झिम्काउन नपाउँदै मेरो क्यामरा बगाएर लग्यो । अनि कसरी मैले कोसिस गर्न चाहँदा चाहँदै मेरो सामथ्र्य पुगेन त्यसलाई जोगाउन । मैले धेरै दिनको यताको बसाईँ र क्यामराले मलाई एक किसिमको अनौठा दार्शनिक पाठले सिकाएको छ मेरो भविष्य मैले त्यसै गरी चाहँदा चाँहदै समाउन नसकेर एक निमेषभर मै सिधिने त होइन ?
यीनै कुरा मनमा खेलिरह्यो । पुरानो वर्षको अन्तिम दिन । २०६७ को अन्तिम दिन यस्तै कुरा मनमा खेलिरह्यो ।
अनि आफैँलाई सम्झाएर कोठाको ढाका बन्द गरेँ- ‘भोलि संसार बिउँझिदा मेरो आजको असफलता मेटियोस् ।’
P.S. मेरो महिनाभरको पहिलो तलबले किनेको क्यामरा पहिलोपटक देखेको छालसँग जिस्किँदा गल्ती बिनै गुम्यो……. त्यसलाई त मेरो अर्को महिनाको तलबमा मिलाउँदा भनेर मैले नयाँ किनेँ, रिप्लेस गरेँ । तर मेरो भविष्य ?????
This entry was posted in monologue and tagged Camera,career,future,Happy New Year,hope,Inferior,Masters,Optimistic. Bookmark the permalink.
← दुधकासी आमैको गाउँमा
सोचे जस्तो हुन्न जीवन…….. →
One thought on “भोलि संसार बिउझिँदा मेरो आजको असफलता मेटियोस्….”
Aakar | अप्रील 15, 2011 मा 1:14 बिहान
जसलाई जुन काम मा आनन्द आउँछ, सायद त्यही काम नै उपलब्धि हुन्छ, चाहे गतवर्ष को होस् या आउने वर्ष को ।
अब फेरि अर्को क्यामेरा किन्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। चेन्नइ बसाइ रमाइलो रहोस् साथै नयाँ वर्ष को शुभकामना ।